အသိုက် - ဝီကီပီးဒီးယား
Place of refuge for animalsတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:Place of refuge for animals
အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် အသိုက် (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
အသိုက်ဟူသည်မှာ ဥများ၊ ရင်သွေးငယ်များအပြင် မိမိကိုယ်တိုင် နားနေခိုလှုံနိုင်ရန်အတွက် အချို့ငှက်များက တည်ဆောက်ထားသော ပုံစံ ဖြစ်သည်။ အသိုက်ကို များသောအားဖြင့် ငှက်များ ဆောက်လုပ်သည်မှန်သော်ငြား၊ ကျောရိုးရှိ မျိုးရင်းအားလုံးနှင့် ကျောရိုးမဲ့အချို့ကလည်း အသိုက်ကို ဆောက်သည်။ အသိုက်ကို အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ဥပမာ သစ်ခက်သစ်ကိုင်း၊ မြက်ပင်၊ သစ်ရွက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ မြေကြီးပေါ်၌ ဤအတိုင်း ချိုင့်ခွက်ရာကလေး၊ ကျောက်တုံး၊ သစ်ပင်ထက်နှင့် အဆောက်အဦများအကြား တွင်း၊ ဂလိုင်၊ အပေါက်ကလေးများတွင် ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်ပေမည်။ လူသားများ ပြုလုပ်သော ကြိုး၊ ပလတ်စတစ်၊ အဝတ်စ၊ စက္ကူစသည်တို့ကိုလည်း အသုံးပြုထားနိုင်သည်။ အသိုက်ကို နေရာဒေသမျိုးစုံဝယ် တွေ့မြင်ရနိုင်သည်။
အသိုက်ဆောက်ခြင်းကို ငှက်များနှင့် သွေးနွေးသတ္တဝါများတွင် သဘာဝအလျောက် ရှင်သန်ရရေးထိုးထွင်းသိက တွန်းအားပေးသည့်အတွက် လုပ်ဆောင်ရလေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် မျိုးစိတ်တမျိုးစီတွင် တမူထူးခြားသော အသိုက်ဆောက်ပုံဆောက်နည်းကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ငှက်ကြီးများ ဆောက်သော အသိုက်နှင့် ငှက်ငယ်များ ဆောက်သော အသိုက်သည် မတူကွဲပြားသည်။ မြေ၌ တွင်းတူး အသိုက်လုပ် နေထိုင်သော သတ္တဝါမျိုး ရှိသလို၊ ရာပေါင်းများစွာသော အသိုက်များ စုပေါင်းအုံဖွဲ့ နေထိုင်သော အသိုက်အုံသဖွယ် နေရာများလည်း ရှိသည်။ ပရေရီခွေးများ၏ အသိုက်နှင့် အင်းဆက်များ၏ အသိုက်များသည် အုံလိုက်ကျင်းလိုက် တွေ့ရသည့် အသိုက်မျိုး ဖြစ်သည်။
၁.၁ အသိုက်ဆောက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
၁.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသုံးချခြင်း
၁.၃ အသိုက်ဆောက်သုံး ကုန်ကြမ်းများ
၁.၄ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှု
၁.၄.၁ ကြာရှည်ခံ သက်ရောက်မှု
ဇီးရှိသော သတ္တဝါများသည် မိမိရင်သွေးငယ်များကို ကာကွယ်ရန် အသိုက်ဆောက်ဉာဏ်ဟု သိကြသော ဘဝပေးတွန်းအားကြောင့် အသိုက်ကို ဆောက်လေ့ရှိကြသည်။ သတ္တဝါများသည် သူတို့ ဥကို၊ ရင်သွေးကို၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် အသိုက်များ ဆောက်လုပ်သည်။ အရိုးစင်းဆုံး အသိုက်ပုံစံများသည် သားကောင်များမှ ဥကို ဝှက်ရန်၊ နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အခြား ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့မှုမရှိရန်၊ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများကြောင့် တကွဲတပြား ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆောက်လုပ်ထားတတ်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် အသိုက်များသည် ဥဥသော အမအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို ပေးသည်။ 
အသိုက်ဆောက်တတ်သူများစွာသည် ရင်မှ ပေါက်သော သားငယ်များကို မိဘမေတ္တာ ပေးတတ်သော်လည်း အချို့မှာ ဤအတိုင် ဥဥပြီး၊ ထားပစ်ခဲ့သည်။ သားဖောက်ခြင်း (ဥပေါ်ဝပ်ခြင်း)သည် ငှက်များအကြား တွေ့ရများသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ မိဘမေတ္တာ ပေးအပ်သော ရေချိန်ကိုလိုက်၍ အသိုက်သည်လည်း ပိုပို၍ ရှုပ်ထွေးစွာ တည်ဆောက်လာသည်။  အသိုက်ဆောက်ခြင်းသည် အဖော်လိုအပ်သည့် အပြုအမူပေါ် အခြေတည်သည်။ ဦးရေအများကို နေရာသေးသေးတွင် ထားကာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ လိုက်ပါနိုင်မှု မြင့်မားလာသည်။ အသိုက် ဆောက်ပုံ အရှုပ်ထွေးဆုံး အင်းဆက်များသည် အကြီးအကျယ်အုံဖွဲနေထိုင်တတ်သော ပုံစံကို ပြနေသည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများကြား၊ naked mole-rat သည် ရာပေါင်းများစွာသော အိမ်ခန်းများ လမ်းမြောင်များ ဖောက်လုပ်ထားသည်ကို ကြည့်၍ ဆိုရှယ် အင်းဆက်များကဲ့သို့ အတန်းအစားခွဲတတ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ 
ဆောက်လုပ်ရာ၌ ကုန်ကြမ်းကို ရရာ အလွယ်ရှာသုံးခြင်းသည် ပစ္စည်းစုဆောင်းရန် အင်အား သိပ်မသုံးရခြင်းဟူသော အားသာချက် သို့မဟုတ် အသိုက်ကို သိပ်မဆောက်တတ်ခြင်းဟူသော အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်မည်။ အသိုက်ဆောက်ရာ၌ သဘာဝမှအလျောက် ရွေးချယ် ဆောက်လုပ်ခြင်းက ကုန်ကြမ်းကို သေချာရွေးချယ်၍ ဆောက်လုပ်ခြင်းထက် ပိုတွေ့ရများသောကြောင့် ဖြစ်သည်။  အခြေခံအဆင့်တွင် အသိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပုံစံ ၂ မျိုးရှိသည်။ ပုံသွင်းခြင်းနှင့် စုစည်းခြင်း။
ပုံသွင်းခြင်းသည် လိုချင်သော ရလဒ် ရအောင် ကုန်ကြမ်းကို ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်းသည် စုဆောင်းခြင်း၊ သယ်ပို့ခြင်းနှင့် အသိုက်ပုံပေါ်လာအောင် ပစ္စည်းများကို စီစဉ်နေရာချခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ သယ်ပို့ရခြင်းသည် အချိန်နှင့် အားအင် များစွာ ကုန်သည်ဖြစ်၍ သတ္တဝါများသည် များအားဖြင့် နီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အလွယ်ရသော ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ဆောက်ယူလေ့ ရှိသည်။
အပင်ကြွေသည် အသိုက်အတွက် အသုံးများဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းပင်တည်း။ အခြား အတွေ့ရများသော ကုန်ကြမ်းမှာ သားမွေး သို့မဟုတ် ငှက်မွေးများ၊ အခြားမှ မဟုတ်လျှင် မိမိကိုယ်ပေါ်မှ သော်လည်းကောင်း၊ ရွှံ့၊ ဖုန်မှုန့်၊ မစင်နှင့် တိရစ္ဆာန်ကိုယ်မှ ရသော အထူး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသော်လည်းကောင်း ပါဝင်သည်။
အသိုက်ဆောက်ခြင်းသည် ၎င်းနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု တစိတ်တဒေသ ရှိနိုင်သည်။ တောင်အာဖရိကတွင် ခြများနှင့် Mole rat များသည် မြေအောက်တွင် တွင်းတူးနေထိုင်သည် ဖြစ်၍ ကျယ်ပြန့်သော လွင်တီးခေါင်တွင် ဗြက် ၃၀ မီတာ၊ အမြင့် ၂ မီတာ ရှိသော တောင်ပို့များစွာ ပေါ်ပေါက်လာကာ၊ mima prairie landscape မြေမျက်နှာသွင်ပြင် ဖြစ်လာစေသည်။ အလားတူ တည်ဆောက်ပုံမျိုးကို အမေရိက၌လည်း တွေ့ရကာ၊ pocket gopher များက ဖြစ်စေသည်။ အာဂျင်တီးနားတွင် ကိုက်ဖြတ်သတ္တဝါ တမျိုး Ctenomys က ဖြစ်စေသည်။
Megapode ငှက်များ ဆောက်သော အသိုက်များဆိုလျှင် ၁၀ မီတာ မြင့်ပြီး၊ ဒေသတခုတည်းတွင် အမြောက်အမြား တွေ့ရခြင်းကြောင့်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပင် လူဆောက်ထားသည်ဟု အထင်အမြင်မှားရသည်။ 
အသိုက်ဗိသုကာပညာသည် သတ္တဝါ၏ ပုံပန်းသွင်ပြင်အတိုင်း မျိုးစိတ်များကို ခွဲခြားရန် အသုံးဝင်ချင် ဝင်လိမ့်မည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ပုံပန်းလက္ခဏာအတည်ပြုခွဲထုတ်သော မျိုးစိတ်များကို ethospecies ဟု ခေါ်သည်။ အသိုက်ဆောက်အတတ်သည် နကျယ်ကောင်၊ ခြများတွင် တွေ့ရများသော်လည်း၊ ငှက်များတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ အသိုက်ဆောက်ရာ တကောင်ချင်း ဆောက်ပုံ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲ ကွဲပြားမှု ရှိသည်။ ထိုကွဲပြားမှုများသည် မျိုးရိုးကြောင့်လော၊ ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူလောဆိုသည်ကိုမူ မသိရသေးချေ။ 
ဥမင်တူးတတ်သော နို့တိုက်သတ္တဝါများအနည်းငယ်မှ လွဲ၍၊ အသိုက်ဆောက်သူများသည် ခန္ဓာဗေဒပိုင်းတွင် ထူးခြားမှု မရှိချေ။ ဤအတိုင်း မိမိခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးချကာ ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း အသိုက်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ 
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ငှက်သိုက်
ယေဘုယျအားဖြင့် ငှက်များသည် ငှက်မျိုးစိတ်အားလုံး အသိုက်မဆောက်သော်လည်း၊ အကျွမ်းကျင်ဆုံး အသိုက်ဆောက်သူများ ဖြစ်သည်။ အချို့ငှက်က ငေါထွက်နေသော ကျောက်စွန်းများတွင် သို့မဟုတ် မြေလွှာသက်သက်တွင် ဤအတိုင်း မည်သည့် အရံအတားမှ မပြုလုပ်ဘဲ ဥဥသွားသည်။ အသိုက်ဆောက်ပုံ ရှုပ်ထွေးလှခြင်းသည် ငှက်များ၏ မွေးရာပါ အားသာချက် ဖြစ်နိုင်သည်ဟူ ယူဆရသည်။  အသိုက်က အပူချိန်ကို ထိန်းညှိရာ၌ကူပေးကာ၊ သားရဲကောင်အလိုက်ခံရသော အန္တရာယ်မှ လျှော့ချပေးသည်။ ပေါက်လာသော ရင်သွေးငယ်များ ကြီးပြင်းလာသည်အထိ အခွင့်အရေးရစေသည်။ 
ငှက်သိုက်များသည် မြေပြင်ပေါ် ရိုးရိုး ကုတ်ခြစ်ထားခြင်းမှသည် သစ်ကိုင်းပေါ် အသေးစိတ် ကျကျနန ရက်လုပ်ထားသော ပန်းဆွဲ၊ စက်လုံးပုံစံ အစုအဝေးအထိ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။ megapode သည် သူတို့ ရင်သွေးများကို တိုက်ရိုက် ဝပ်ပေးခြင်း မပြုတတ်ပေ။ သစ်ရွက်ဆွေးပုံများတွင် ကလေးများကို အနွေးဓာတ်ပေးသည်။ Macrocephalon maleo ဟူသော မျိုးစိတ်တမျိုးသည် မြေကြီးအပူ (ဘူမိအပူ) ကြောင့် နွေးနေသော မီးတောင်သဲများကို သုံးပြီး သူ့ဥများကို အနွေးဓာတ်ပေးသည်။  ရိုးစင်းသော အသိုက်ဆောက်သူများမှာ စွန်ရဲ၊ ဇီးကွက်နှင့် ကမ်းခြေငှက်များ ရှိသည်။ weavers ရက်ကန်းသည်ငှက်များသည် မြက်ပင်များကို အထုံးထုံးပြီး အသိုက်ကို ကျကျနန ဆောက်သည်။ ငှက်သိုက်အများစုသည် ရွှံ့၊ သစ်ကိုင်းနှင့် အရွက်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး၊ ခွက်ပုံစံ အသိုက်များ ဆောက်လေ့ရှိပြီး၊ နေရာတနေရာ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကြိုးကြာနှင့် ပျံလွှားကဲ့သို့သော အချို့ငှက်များသည် မိမိတို့ အသိုက်များ စေးကပ်မြဲနေစေရန် တံတွေးဆွတ်တတ်သည်။ စား၍ ရသော ငှက်သိုက် ဇီဝစိုးများသည် တံတွေးသက်သက် (အန်ဖတ်)ကိုသာ သုံး၍ မိမိတို့အသိုက်များကို ဆောက်လုပ်သည်။  rufous hornero သိုက်သည် ရွှံ့၊ မစင်နှင့် လုံးလုံးလျားလျား ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် ဆောက်ပြီး၊ နေရောင်ထိတွေ့သော် မာကျောသွားကာ၊ နေထိုင်ရသွားသည်။  Tailorbird ဆိုလျှင် သူတို့ အသိုက်နေရာအတွက် အဖုံးကို အရွက်များ တုတ်ဖြင့်သီသည်။ 
အဖော်မင်သော ရက်ကန်းငှက်များသည် ဘုံသိုက်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ကာ၊ အထဲတွင် တကောင်ချင်းစီအတွက် အသိုက်များစွာ တည်ရှိသည်။ အသိုက်ကို မြက်ပင်နံရံများဖြင့် ကာရံပြီး အခန်းခွဲထားသည်။ အသိုက်သို့ ဝင်ပေါက်ဝတွင်၊ တုတ်ချောင်းများ စိုက်ကာ ကျူးကျော်သူကို ကာကွယ်ထားသည်။  ထို ဘုံသိုက်ကြီး တခုတည်းကပင် ၂ မီတာမြင့်ပြီး၊ ၈ မီတာ ဗြက်ရှိသည်။ ငှက်စုံတွဲ ၃၀၀ လောက်ထိ ဝင်နေလောက်အောင် ဆံ့သည်။  ထိုအခါ၊ အခြားငှက်များကလည်း ရက်ကန်းငှက်သိုက်ကြီးထိပ်တွင် မိမိအသိုက်ကို လာဆောက်ပြီး မှီတင်းနေထိုင်လေ့ရှိသည်။ 
အချို့ငှက်များက အသိုက်ကို သစ်ပင်ထက် ဆောက်သည်။ လင်းတ၊ သိမ်းငှက်နှင့် အခြား ပင်လယ်ငှက်များသည် ကျောက်တောင်စွန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများသည် မြေပေါ်သို့မဟုတ် ထယ်ကြောင်းများထဲတွင်လည်းကောင်း အသိုက်ဆောက်တတ်သည်။  မျိုးစိတ်တခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်အသိုက်မူဟန် ရှိသည်။ အနည်းငယ်မှာ သူတို့ဆောက်သော အသိုက်နေရာ ရွေးချယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားသည်။ မျိုးစိတ်အများစုသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မည်သည့်နေရာမဆို ရွေးချယ်ပြီး၊ မိမိအသိုက်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ကြသည်။ မျိုးစိတ်များစွာ ဖြစ်နိုင်သ၍ ရှားစောင်းပင်ပေါ် ဆောက်မည်ဟု ရွေးချယ်ကြသည်။ bushtit နှင့် Bullock's oriole တို့သည် သူတို့အသိုက်ကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ သစ်ခက်များ၏ အဖျားတွင် တွဲလောင်းချ ဆောက်လေ့ရှိသည်။  Oropendola သည် တွဲလောင်းချ အသိုက်များတွင် နေထိုင်ပြီး၊ ၁.၈ မီတာ ရှည်သော တွဲလျားကျ စပျစ်ပင်များကို အခြေစိုက်စခန်းသဖွယ် လုပ်ထားသည်။   တွဲလောင်းချအသိုက်သည် သေးငယ်သော သစ်ခက်များနှင့် တွဲချည်ထား၍ သားရဲများအတွက် မလွယ်ကူနိုင်ချေ။  အခြားမျိုးစိတ်များသည် သစ်ပင်သစ်ခေါင်းပေါက်များ မရနိုင်သောအခါ၊ လူနေအိမ်များ၊ ငှက်အိမ်များတွင် ကွဲကြောင်းများကြားတွင် ကတ်သီးကတ်သတ် နေသည်။ 
ပုံမှန်ငှက်သိုက်များသည် အရွယ်အစား ၂ စင်တီမီတာမှသည် (သိမ်းငှက်) အချင်း ၂ မီတာထိ ရှိသည်။  မှတ်တမ်းတင်ရသလောက် အကြီးဆုံးငှက်သိုက်မှာ bald eagles စုံတွဲက ပြုလုပ်သောအသိုက်ဖြစ်ကာ၊ အချင်း ၂.၉ မီတာရှိပြီး၊ ၆ မီတာ နက်သည်။ ၂ တန်ထက်ပိုလေးမည်ဟု တွက်ချက်သိရသည်။  အပေါ့ဆုံးငှက်သိုက်မှာ ဂရမ်အနည်းငယ်မျှသာ လေးလိမ့်မည်။  mallee fowl တို့ သားဖောက်ဝပ်သော တောင်ပို့မှာ ၄.၅၇ မီတာ (၁၅.၀ ပေ) မြင့်ကာ၊ ဗြက်မှာ ၁၀.၆ မီတာ (၃၅ ပေ) ကျယ်သည်။ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရာ၌ ၃၀၀ tonne (၆၆၀,၀၀၀ ပေါင်) ခန့်မျှထိလေးသော ကုန်ကြမ်းများ ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားသည်ဟု တွက်ချက်ကြသည်။  မျိုးတုံးသွားသော Sylviornis neocaledoniae သည် အချင်း ၅၀ မီတာ (၁၆၀ ပေ) ရှိသော အသိုက်ပို့များကို ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ဖွယ် ရှိသည်။ 
အခြားကြည့်ရန်။ Nest-building in primates နှင့် Nest-building in domestic pigs
ကိုက်ဖြတ်စားကောင်၊ ယုန်နှင့် မြေရှဉ့်များကဲ့သို့သော သေးငယ်သည့် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များစွာသည် မြေကြီးထဲသို့ တွင်းလှိုဏ် တူး၍ သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ရင်သွေးငယ်များကို ကာကွယ်သည်။  ပရေရီခွေးများသည် ကျယ်ပြောသော မြေတခွင်ဝယ် ဥမင်လှိုဏ် ဖောက်လုပ် နေထိုင်သည်။ ၂၅,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၆၅,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျယ်သော မြို့တမြို့ဟု ခေါ်ရလောက်သည့် တည်ဆောက်ပုံ တခုဆိုလျှင် ကောင်ရေ သန်း ၄၀၀ ထိ ဆန့်နိုင်သည်။ အိမ်များကို အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့် မီးဒဏ် ခံနိုင်အောင် မွမ်းမံထားသည်။ ခွေးပေါက်များကို အပူချိန်မျှတသည့် မြေအောက်အနက်ဆုံး အိမ်ခန်းများဝယ် ကြီးပြင်းအောင် မွေးမြူကြသည်။ 
ရက်ကွန်း၊ အနံ့ဆိုးထုတ်ရှဉ့်များ အပါအဝင် နို့တိုက်သတ္တဝါ အတော်များများသည် သူတို့ အသိုက်ကို ဆောက်လုပ်ရန်၊ မြေကြီးထဲသို့မဟုတ် သစ်ပင်ထက်တွင် သဘာဝ အခေါင်းပေါက်များကို ရှာဖွေသည်။ ရက်ကွန်း နှင့် အခြား ကိုက်ဖြတ်ကောင်များသည် အရွက်များကို သုံး၍၊ သစ်ပင်နှင့် မြေအောက်ထဲတွင် အသိုက်ဆောက်ကြသည်။ အပင်နေရှဉ့်များသည် ရှဉ့်သိုက်များကို သစ်ပင်ထက်ဝယ် ဆောက်လျှင်၊ ဗိုး vole(ခ) ကြွက်ဝမ်းပူများက မြက်ပင်ရှည်တောထဲ၌ အသိုက်ဆောက်ကြသည်။  အချို့မျိုးစိတ်များတွင် အသိုက်ကို သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အိမ်ဆောက်ပေးခြင်း ဖြစ်ကာ အချို့မှာမူ ရင်သွေးငယ်များကို ပျိုးထောင်​ရန် ဖြစ်လေသည်။ ဘဲတူကောင်နှင့် ပုရွက်စားကောင်များသည် မိမိအသိုက်ထဲတွင် ဥဥချသည်။ 
ဂေါ်ရီလာမျောက်သည် သူတို့ ညခါကျ အိပ်စက်ရန် အသစ်စက်စက် အသိုက်ကို အရွက်များ အခြားအပင်များဖြင့် နေ့စဉ် ဆောက်လုပ်သည်။ တခါတရံ နေ့ဘက် အနားယူရန် နေ့ခင်းတွင်ပင် အသိုက်ဆောက်တတ်သည်။ အရွယ်အစားပိုသေးသော ဂေါ်ရီလာမျိုးစိတ်သည် သစ်ပင်ထက်တွင် အသိုက်ကို ပြုလုပ်ကာ၊ ပိုကြီးသည်ကမူ မြေပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည်။ အကြီးမားဆုံး မျိုးစိတ် ဖြစ်သည့် အနောက်တိုင်း ဂေါ်ရီလာ၏ နားခိုရာ အသိုက်သည် အချင်း ၁ မီတာ (၃.၃ ပေ) လောက် တိုင်းထွာရရှိသည်။ 
ဖားမျိုးစိတ် အချို့သည် ရိုးရိုးစင်းစင်းမှသည် အရှုပ်ထွေးဆုံးထိ ရှိသော အသိုက်မျိုးစုံကို ဆောက်လုပ်တတ်သည်။  စမ်းချောင်မှီတင်းနေ ဖားများသည် ဥများကို ကော်ထုပ်ကြီးသဖွယ် ထုနှင့် ထည်နှင့် ဥချပြီး၊ ရေအောက်ရှိ အပင်တပင်၌ တွယ်ကပ်ထားတတ်သည်။ ဂျယ်လီပုံစံ ဖြစ်နေ၍ ဥများ ရေယူရာ လျှောက် မလွင့်ပါတော့ချေ။ 
ငါးများ အသိုက်ဆောက်ခြင်းသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ငါးဥများ ဥချခြင်းမှသည် အပင်မှထွက်သော အရာများဖြင့် သေသေချာချာ အလုံဖုံး တည်ဆောက်ခြင်းထိ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ကျောဆူးထောင်ငါးအထီးသည် သူတို့ ကိုယ် ကျောက်ကပ်မှ ထွက်သော အထူးအင်ဇိုင်းတမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပြီး၊ အပင်များကို စုစည်းချည်နှောင်သည်။ 
ဖိုင်:Leatherback Sea Turtle.png
Leatherback Sea Turtle laying eggs in sandy nest
အမေရိကန်မိကျောင်းသည် သားထိန်းတော်သောကြောင့် နာမည်ကြီးသည်။ မြစ်ကမ်းပေါ် သို့မဟုတ် ဟင်းရွက်တောများပေါ်တွင် ရွှံ့နှင့် ဟင်းရွက်များ ရောနှောသော အသိုက်ကြီးကို ဆောက်လုပ်သည်။ အမသည် ဥဥရန် အလယ်တွင် တွင်းတတွင်း တူးသည်။ ပြီးလျှင် အသိုက်ဖြင့် ပြန်ဖုံးအုပ်ပြီး၊ နှစ်လကြာ သားပေါက်သည်ထိ စောင့်ကြပ်သည်။ ဥများ စပေါက်လာသော်၊ အချိန်ကြာ၍ မာကြောလာသော အသိုက်ကို ဖောက်ဖွင့်ကာ ကလေးများကို ရေထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး၊ နောက်ထပ် တနှစ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြန်သည်။ မိကျောင်းများသည် သူတို့ အသိုက်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အကဲဆတ်ကာ၊ တခုခု မှားယွင်းနေပါက အသိုက်ကို စွန့်ပစ်သွားတတ်သည်။ 
မြွေဟောက်များသည် အရွက်နှင့် အခြား အကျိုးအပဲ့များကို သုံး၍ အသိုက်ကို ဆောက်ကာ အထဲတွင် ဥဥပြီးနောက် အထီးအမရော စောင့်ကြပ်သည်။ အပင်ငယ်များကို လည်ပင်းနှင့် တွန့်ညှပ်ပြီး အသိုက်နေရာသို့ ယူဆောင်လာသည်။  ပင်လယ်လိပ်သည် ဒီရေအမြင့်ဆုံးထိ မရောက်လောက်သော သဲထဲတွင် တွင်းတူးကာ ဥများ ဥချသည်။ ၎င်းနောက် ပျော့နေသော ဥများကို နေရောင်နှင့် သားရဲများမှ ကာကွယ်ရန် သဲဖြင့် ပြန်ဖုံးပြီးနောက် ပင်လယ်ထဲ ပြန်ဆင်းသွားသည်။ 
အခြားကြည့်ရန်။ Dinosaur egg
ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းမှ လေ့လာရသလောက်၊ အတော်များများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ အားလုံးပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒိုင်နိုဆောသည် ဥဥသည်ဟု သိရသည်။ ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်များသည် လျှောက်ဥထားသော ဥပုံ ရှိသည့် အသိုက်နေရာများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထဲတွင် ပုံမှန် ဥဥသော ပုံစံ၊ ကွဲနေသော ဥများ၊ သို့မဟုတ် သားပေါက်ထားသည့် ဥပုံစံတို့ ပါဝင်သည်။ 
မွန်ဂိုလီးယားမှ Oviraptor သိုက်သည် အကျော်ကြားဆုံး ဒိုင်နိုဆောသိုက် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မျိုးစိတ်တခုကို အသိုက်ပေါ်၌ ဥဝပ်နေသည့် ပုံပန်းဖြင့် ကျောက်ဖြစ်လျက် တွေ့ရှိရသည်။ နာမည်ပေး ညံ့ဖျင်းလှပုံမှာ Oviraptor ဆိုသည်မှာလားလားမအပ်စပ်သော အဓိပ္ပာယ် - ဥယူသူ (egg taker) ဟူသတည်း။ 
မွန်တာနာတွင် ဥတောင် egg mountain အမည်ရ နေရာ ရှိသည်။ ဒိုင်နိုဆောသိုက် အလေ့အထများကို သက်သေအထောက်အထားများနှင့် တကွ တွေ့ရှိသည်။ ဒါဇင်နှင့် ချီသည်။ အသိုက်တခုစီတွင် Maiasaura ဥထားသည့် ဥ အလုံး ၂၀ လောက် တွေ့သည်။ ဤဆိုက်တွင် ငယ်သွားတွေ့ရရာ၊ ခြေရိုးများ လမ်းပင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်တတ်သေးသည့် အချိန် သွားကျိုးကြေသွားသည့် ပုံ ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ဤမျိုးစိတ်သည် မိမိသားငယ်များကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အုပ်ထိန်းကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ကောက်ချက်ချ ရသွားသည်။ ဤမျိုးစိတ်များသည် သူ့အသိုက်ကို သဲ၊ အပင်ငယ်များဖြင့် နွေးနေအောင် ဖုံးအုပ်ထားဟန် တူပြီး၊ ကောင်းမွန်စွာ စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ဥသိုက်များကို တစုတစည်းတည်း ထားရှိသည်။ 
ပုရွက်ဆိတ်၊ ပျား၊ ခြ နှင့် နကျယ်ကောင် မျိုးစိတ်အများစု ပါဝင်သော အုပ်စုကြိုက်အင်းဆက်များသည် အသိုက်ဆောက်သူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့အသိုက်များကို မြေပေါ်၊ မြေအောက်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ လေဝင်လေထွက်စနစ် ပါမည်။ ဘုရင်မအတွက် အခန်း၊ ဥများအတွက် အခန်း၊ သားလောင်းများအတွက် အခန်း စသဖြင့် အခန်းများ ခွဲခြားထားတတ်မည်။
ပျား၊ ပိတုန်းတို့သည် ပျားအုံဟု ခေါ်ရမည့် သူတို့အသိုက်ကို တည်ဆောက်ရန် သဘာဝအလျောက် အခေါင်းပေါက်များကို မကြာခဏ ရှာဖွေကာ၊ အစာများ သိုလှောင်ပြီး၊ ရင်သွေးငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်သည်။ အခြား ပျားမျိုးစိတ်နှင့် အချို့ နကျယ်ကောင်များသည် မြေကြီးထဲ တွင်းတူးလျှင် တူး၊ မဟုတ်က သစ်သားများကို ကိုက်ဝါးပစ်ပြီး အသိုက်ဆောက်တတ်သည်။  ဥပမာအားဖြင့်၊ Megachile rotundata မျိုးစိတ်တွင်၊ ပိုးမသည် မြေကြီးထဲတွင် အပေါက်သေးသေးများ ဖောက်သကဲ့သို့ သစ်ဆွေးများတွင် ပြွန်ပုံစံ အသိုက်များ ဆောက်သည်။ အခန်းတခုစီကို ပျားမေးရိုးဖြင့် သစ်ပင်အရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်ပြီး၊ ဒစ်ပြားဝိုင်းသဏ္ဌာန် ဖွဲ့စည်းသည်။ ပျားအုံများကို သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ စစ်ထုတ်လိုက်သော ပျားဖယောင်းများပေါ် ထူထောင်ထားသည်။ နကျယ်အုံများကိုမူ သစ်ပင်မှ ရေကို သူတို့တံတွေးဖြင့် စက္ကူပျော့ဖတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ တည်ဆောက်နိုင်သော စွမ်းရည်ပေါ် မှီတည်နေပေသည်။ သိုက်အုံကို မကြာခဏ ဥနှင့် အစာများကို သိုလှောင်ရန် အုံ၏ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခွဲခြားထားတတ်သည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ Tom Deméré (Spring 2002)။ Nests and Nest-building Animals (pdf)။ San Diego Natural History Museum။ August 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ ၂.၈ Mike Hansell (2000)။ Bird Nests and Construction Behaviour။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0521460385။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ ၃.၇ ၃.၈ "nest"။ Encyclopædia Britannica။ September 30, 2013 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ August 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ Mary Beth Griggs (2011-05-26)။ 8 Amazing Architects of the Animal Kingdom။ Popular Mechanics။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Most populous bird's nest။ Guinness World Records။ August 21, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Largest bird's nest။ Guinness World Records။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ Mammal Nests and Burrows။ Kids' Inquiry of Diverse Species။ University of Michigan။ December 3, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Largest mammal to buildanest။ Guinness World Records။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Milius, Susan (2007-01-06). "Most bees live alone: No hives, no honey, but maybe help for crops" (in en). Science News 171 (1): 11–13. doi:10.1002/scin.2007.5591710110. ISSN 1943-0930.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသိုက်&oldid=707588" မှ ရယူရန်
တိရစ္ဆာန်များမှ နားခိုစရာများ တည်ဆောက်မှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။